အဲဒိုခေတ်ရဲ့ ငှားရမ်းမှုစနစ်က အလွန်ပြည့်စုံချက်ပဲ! - JAPO Japanese News
အဲဒိုခေတ်ရဲ့ ငှားရမ်းမှုစနစ်က အလွန်ပြည့်စုံချက်ပဲ!
ဂါ 12 Jan 2021, 14:50 ညနေ
Telework “ အပြင်ထွက်သွားခြင်းမှချုပ်တည်းခြင်း” ဟူသောစကားလုံးသည်ပျံ့နှံ့လို့နေကာ
အိမ်မှာနေထိုင်ရတဲ့အချိန်က ပိုမိုတိုးပွားလို့လာနေပါတယ်။ထို့မှတစ်ဆင့် အိမ်တွင်အားလပ်တဲ့အချိန်ကယခင်ကထက် ပိုပြီးတိုးပွားလာပါတယ်။
လူအများစုကတော့ တိုးပွားလာသောအချိန်ရဲ့ အားလပ်ချိန်များတွင် DVD များငှားရမ်းခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းမှတဆင့်ကြေးပေးသွင်းခြင်းကာ ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ကုန်ဆုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။ဒီတော့ရှေးတုန်းက လူကြီးတွေရော ဒီလိုအချိန်မှာဘာလုပ်ခဲ့ကြသလဲ? တကယ်တော့အဲဒီခေတ်တုန်းကလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။
စာအုပ်အငှားဆိုင် (Kashihonya) ဟာဆိုရင် အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပြည့်စုံမှုရှိပါတယ်။
ထို့အပြင်သစ်သားဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသောအဆောက်အအုံများနှင့် နီးကပ်စွာတည်ရှိသော အဲဒို (မျက်မှောက်ခေတ်တိုကျို) သည် မီးလောင်လွယ်သောအန္တရာယ်ရှိပြီး အိမ်သုံးပစ္စည်းများရှိခြင်းသည် အန္တရာယ်ရှိသည်ဟုယူမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့် ဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ငှားရမ်းလိုရနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အိုးများ၊ ရေနွေးအိုးများ၊ ဖူတွန်မွေ့ယာများ၊ အတွင်းခံအဝတ်များအထိတိုင်အောင် ငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်။သာမန်ပြည်သူတို့၏အိမ်များသည်အလွန်သေးငယ်ပြီး သူတို့မိသားစုများနှင့်အတူ အခန်းငယ်တစ်ခန်းတွင်နေထိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့လိုအပ်သည့်အရာများကိုသာ ငှားရမ်းခြင်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူစာဖတ်ခြင်းသည် အလေ့အကျင့်ဖြစ်သော်လည်း အစပိုင်းတွင် ဆာမူရိုင်းနှင့်ဘုရားကျောင်းရှိသူများအတွက်သာ ထုတ်လုပ်တဲ့ ပညာရေးစာအုပ်များနှင့်ဘာသာရေးအကြောင်းများသာရှိခဲ့ကြပါတယ်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ရုပ်ပုံစာအုပ်များ၊ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာများနှင့် ရယ်မောခြင်းများဖြင့် ရသစာပေနှင့် ၀တ္ထုများ တိုးပွားလာပါတယ်။ အဲဒိုခေတ်အလယ်ပိုင်းတွင်လူများသည် စာအုပ်များကိုပျော်မွေ့လာကြပြီး စာဖတ်ခြင်းလည်းတိုးတက်လာကြပါတယ်။သို့သော်လက်ရှိခေတ်လိုမျိုး စက်ဖြင့်ပုံနှိပ်မည့်အစား ၎င်းသည်သစ်သားဖြင့်ဖိကာ မှင်ကိုသုံးပြီး စက္ကူပေါ်တွင်ရေးခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ရသောကြောင့် ၎င်းသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်ဝေခြင်းမပြုနိုင်ပါဘူး။
ထိုအချိန်တုန်းက စာအုပ်စျေးနှုန်းကပိုမိုမြင့်မားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီအချက်က ငှားရမ်းခြင်းစနစ်ဖြစ်ပေါ်လာစေသောအရာဖြစ်ပါတယ်။ပို၍ အဆင်ပြေစေမည့်အချက်မှာ စတိုးဆိုင်သို့မသွားဘဲငှားရမ်းနိုင်သောစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
စာအုပ်တွေအများကြီးရှိတဲ့လူတွေဟာ မြို့ကိုလှည့်ပတ်ပြီး စာဖတ်ပြဖို့အတွက် ဖောက်သည်ခေါ်ကြပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးကို ကိုရီးယားရှေးခေတ်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာလည်းတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အကယ်၍ သင်ဟာအမြဲတမ်းချေးငှားသူတစ် ဦး ဖြစ်ရင် အရောင်းဝန်ထမ်းက သင့်ကိုမှတ်မိပြီးစာအုပ်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မယ်။
ဤသည်က ကျွန်ုပ်တို့ယခု Amazon ၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ဆင်တူပါတယ်။လက်ရှိတွင် Amazon သည် ကုန်ပစ္စည်းကိုသင်ဝယ်ယူသောအခါ သင့်အိမ်သို့ပို့ပေးသော်လည်း အရင်ခေတ်က အရောင်းစာရေးနှင့်အတူသင့်အိမ်သို့ပို့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအမျိုးမျိုးကိုနားထောင်ရင်းစာအုပ်တစ်အုပ်ရွေးရန်အမေဇုန်ထက် ပို၍ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်အငှားဗီဒီယိုစတိုးဆိုင်များကတော့ ငှားရမ်းပြီးရင် ပြန်ပြီးမပေးလို့မရပါဘူး။
ဒါကခက်ခဲပါတယ်။အဲဒိုခေတ်တုန်းက ငှားရမ်းသည့်စာအုပ်များကို လာငှားတဲ့အရောင်းစာ‌ရေးများထံမှ ငှားယူနိုင်ပြီး
အရောင်းစာရေးတစ် ဦး တွင်ဖောက်သည် ၂၀၀ ခန့်ရှိပါတယ်။
ဆိုလိုတာကသူတို့ခေါင်းထဲမှာ လူအယောက်200ရဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်မှုရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ရောင်းချမှုပညာဟာ ဤကဲ့သို့သောဖြစ်ရမည်‌ဆိုတဲ့ ဥပမာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်တိုက်ကြီးရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဥာဏ်ကြီးရှင်ရှိနေခဲ့ !!! အခမဲ့ငှားရမ်းခြင်းဖြင့် တစ်ရှိန်ထိုးရောင်းအားတိုးချဲ့ခြင်း !!!
၀င်ကြေးယန်း၁၅၀၀တောင်ပေးရတဲ့ စာအုပ်ဆိုင်မျိုးက အောင်မြင်ပါ့မလား??
လူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေမယ့် ညဈေးပေါင်မုန့်ဆိုင်ဖွင့်ပါပြီ !
၁၉၁၃ ခုနှစ်ရဲ့ တိုကျိုမြို့သို့ အလည်တစ်ခေါက် !!!!
နာမည်နဲ့တင်စားချင်စိတ်ပျောက်စေမယ့် ရေခဲမုန့်များ ?!!!